Himalaya Dainik » यस्ता उपाय अपनाउनुहोस् कहिल्यै लगाउनुपर्दैन चश्मा
पछल्लाे समय धेरै जस्ताे काम इन्टरनेटबाट गरिन थालिएकाे छ । यदि तपाइँको आँखा लामो समय सम्म कम्प्यूटरमा काम को बस्दा वा किताब, टिभी हेर्दा तपाईको आँखा दुख्न थाल्छ भने, साेच्नुहाेस् कि अब खतरा हुनेछ। यस्तो अवस्थामा, कमजोर आँखाको कारण, चश्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर केहि मानिसहरु पहिले नै चश्मा लगाएका हुन्छन् , तिनीहरूले के गर्नु पर्छ र के तपाईं चश्माबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ?
आँखा बढाउन र चश्मा हटाउनको लागि, जसले सजिलै चश्माबाट छुटकारा दिलाउन के गर्ने ? आँखा हाम्रो शरीरको एक अनमोल बस्तु हो। दिनमा हुने ९० प्रतिशत क्रियाकलापलाई हामी हाम्रो आँखाको माध्यमबाट सेन्स गर्न सक्छाौँ । बढ्दो उमेरसँगै, हाम्रो दृष्टि सुस्त हुन थाल्छ, जुन साधारण हो। तर आँखाको रोशनी कम हुनमा धेरै कारणहरू हुन सक्छन् ।
यदि तपाईं चश्माबाट विचलित हुनुहुन्छ र फेरि आफ्नो दृष्टि प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, भने तपाईं सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। आज हामी तपाईंलाई कसरी आँखा र चश्मा र लेन्सको उज्यालो प्रकाशबाट छुटकारा पाउन सक्दछौँ भन्ने कुराको बारेमा बताउने छौँ ।
आवश्यक सामग्री,घिउँ २५० ग्राम,,बदाम १५० ग्राम,,गाजर ५०० ग्राम,,मुगु मुसुरोको दाल १०० ग्राम,र चीनी २०० ग्राम
बनाउने बिधी: पहिला गाजरलाई उमाल्नु र घाममा सुकाइदिनु, गाजर राम्रोसँग सुखेपछि सबै सामाग्रीलाई मिलाएर राम्राेसँग पिस्नुहोस् । यसपछि कराईमा घिउँ हालेर सबै सामाग्रीलाई त्यसमा हाल्नुहोस् र राम्रोसँग मिलाई मिलाई चलाउनुहोस् । यसपिछ यसलाई तबसम्म पकाउनुहोस् जबसम्म यो गाढाँ हुँदैन । गाढाँ भइसकेपिछ यसलाई काँचको कुनै भाडाँमा राख्नुहोस् र सेलाउन दिनुहोस् ।
अब यसलाई हरेक बिहान खाली पेटमा यसको एक चम्चा लिने गर्नुहोस् । यो गरेर, केहि दिनहरूमा आँखाबाट चश्मा हट्नेछ र आँखाको रोशनी धेरै गुणा बढ्नेछ। यसको प्रयोग धेरै व्यक्तिहरूले गरीसकेका छन् र यो १०० प्रतिशत फाइदाजनक छ।